Tantara / Ny Sekoly Protestanta. – FJKM
Ny niandohan’ny sekoly protestanta teto madagasikara
Ny antompisian’ny sekoly protestanta
Ny politikam-panabeazana tamin’ny andron’ny misionera
Ny tenin-dreny no enti-mampianatra. Ianarana sy fehezina ny teny iraisam-pirenena (ny teny anglisy). Ianarana ihany koa ny siansa. Hilofosana ny fianarana ny soratra masina satria ny fahaizana ny teny sy ny siansa dia natao hahalalana bebe kokoa an’Andriamanitra? Ary hahalalana an’Andriamanitra dia ilaina ny mamaky baiboly.
500 taona izay ny fanavaozana nataon’i Luther ka nahafahan’ny zazavavy sy ny kilasy sosialy noheverina ambany nianatra. 200 taona no nisy sekoly protestanta izay nisokatra ho an’ny rehetra teto Madagasikara. Ny sekoly dia natao hanabeazana ny saina, ny vatana, ny sosialy , ny moraly mba ahafahana mahalala an’Andriamanitra sy miasa toa azy. Ndeha hatao ny jery todika 200 taona aty aoriana. Manao ahoana ny sekoly? Inona no zavatra tsara tazonina? Inona no lesoka arenina hahatarana ny tanjon’ny sekoly protestanta? Inona no hataonao amin’ny maha-mpampianatra , maha-fiangonanana, maha olom-pirenena anao?…….